Kiribati dia miaro ny Nosy Phoenix: mikarakara fialan-tsasatra ny Komity Mpanolo-tsaina ny fizahan-tany
Home » Travel Associations News » Kiribati dia miaro ny Nosy Phoenix: mikarakara fialan-tsasatra ny Komity Mpanolo-tsaina ny fizahan-tany
Janoary 5, 2018
Ny Repoblikan'i Kiribati dia nandray ny dingana mendri-piderana tamin'ny fanambarana ny nosin'ny nosy Phoenix sy ny rano manodidina azy, velaran-tany 410,500 kilometatra toradroa, amin'ny maha-faritra voaaro an'i Phoenix Islands (PIPA) azy ary eo ambanin'ny vakoky UNESCO World Heritage site.
Ny komity zokiolona momba ny fizahan-tany dia mikarakara fialan-tsasatra hatao ao Tokaraetina Lodge any Avaratr'i Tarawa ny zoma 15 janoary miverina ny alahady 17 janoary izay handinihan'izy ireo ny fanavaozana ny drafitra fitantanana ny faritra misy ny Nosy Phoenix [PIPA] 7 taona lasa izay ho an'ny famolavolana ny paikady PIPA Eco-fizahantany momba ny fampiasam-bola.
Ity antontan-taratasy ity raha vantany vao vita dia ho toy ny torolàlana feno ho an'ireo mpampiasa vola mety ho liana amin'ny fanaovana fampiasam-bola ao Kanton.
Antenaina fa io PIPA Eco-fizahantany sy teti-bola fampiasam-bola io dia ho vita ary vonona hampiasaina amin'ny fiandohan'ny taona 2018.
Ny lahasa lehibe amin'ity indray mitoraka ity dia ny famolavolana ny Torolàlana momba ny fampiasam-bola ho an'ny fizahan-tany (KPETIG) Kiribati PIPA.
Ny tena tanjon'ny KPETIG dia ny hitarika ny Governemantan'i Kiribati sy ny sehatra tsy miankina hahita amin'ny sehatra fakana vola lehibe ilaina hanampiana ny Nosy Kanton - ny PIPA Hub dia miakatra haingana ho ivon-toeram-pizahantany ara-tontolo iainana sy fikarohana.
Ny PIPA misy an'i Kanton dia World Heritage Site ary Protected Area ka ny KPETIG dia antenaina hametraka eo afovoany ny fitehirizana sy ny fitehirizana ny PIPA sy ny fananana voajanahary sy ny vakoka rehetra manana ny lanjany manerantany. Faritra voaaro ny nosy Phoenix- ny faritra arovana indrindra sy lalina indrindra amin'ny fiarovana an-dranomasina eo ambanin'ny vakoky UNESCO World Heritage site
Ny fanambarana nataon'ny Kribati sy ny dokambarotra manodidina ny fahalianan'ny PIPA amin'ny fizahan-tany, indrindra ny fizahan-tany antsitrika, dia nitombo.
Ny fizahantany dia hita ho loharanom-bola mety hitrandrahana maharitra ho an'ny GOK sy ny PIPA.
Ny komity mpanolo-tsaina ny fizahantany PIPA (PTAC) dia naorin'ny Komity PIPA Management (PMC) tamin'ny taona 2014 ary notarihin'ny talen'ny fizahan-tany. Ny tena tanjon'ny PTAC dia ny hanome torohevitra mahasoa amin'ny PMC momba ny raharaha mifandraika amin'ny fizahantany ara-toekarena PIPA hiteraka fidiram-bola sy asa ary koa hanome torohevitra momba ny paikady marketing mahomby indrindra hampiroboroboana ny hetsika fizahantany ara-tontolo iainana ao amin'ny PIPA.
Tamin'ny taona 2015, ny PMC dia nanohana ny haza lambo ary namoaka ny lalao jono ho iray amin'ireo hetsika fizahan-tany vaovao ao PIPA. Ny hetsika fizahan-tany hafa dia misy ny antsitrika, ny fijerena vorona ary ny fitsangatsanganana ireo tsangambato manan-tantara sy lova.
Mpitsidika ny Nosy Marshall: Aza hadino ny mahita ny hakanton'ilay nosy eo amin'ny fijanonan'ny bus
Fizahantany Cook Island: nahagaga ny fahalianan'ny sinoa